Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Mampiseho ny efitranon'i Raphael ny tranombakoka Vatican
Ny Vatican Museum dia nanokatra ny varavaran'ny efitranon'i Raphael telo (amin'ny efatra) ho an'ny mpanao gazety sy vahiny manokana voafantina mba hankafy ny famerenana ireo efitrano izay trano nipetrahan'ny Papa Julius II tamin'ny voalohany.
Ny fanatrehan'ny Profesora Christoph Litpold Frommel, mpanoratra ny iray amin'ireo boky kanto farany "The Stanze di Raffaello", natolotra ho topy maso, dia tombony fanampiny ho an'ilay fotoana manokana. Ramatoa Barbara Jatta, talen'ny Museum Vatican dia nampahafantatra ny asan'i Prof. Frommel, narahin'ny fanehoan-kevitr'i Prof. Ms. Stefania Pasti sy ny Cl. Claudio Castelletti.
Prof. Christoph Litpold Frommel, Ramatoa Barbara Jatta ary Prof. Stefania Pasti
Ny efitrano fahefatra izay mbola eo am-pamerenana amin'ny laoniny dia ho vonona amin'ny taona 2020. Hisokatra ho an'ny besinimaro ireo efitrano efatra amin'ny taona 2020 amin'ny fankalazana ny tsingerintaonan'ny Emperora Constantin ary nantsoina hoe “efitranon'i Raphael” hisarika ny sain'ny mpitsidika ny Museum Vatican ampidiro ao amin'ny fitsidihan'ny Sistine Chapel izy ireo.
Ny tantara fohy:
Tamin'ny taona 1508, ny Papa Julius II, teo an-tampon'ny voninahiny, dia noravahan'i Michelangelo sy ireo efitranony manokana Raphael ny trano fiangonana Sistine, nahatsapa roa taona vitsivitsy monja tamin'ireo sangan'asa lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zavakanto manontolo. Raha nifantoka tamin'ny famoronana olona i Michelangelo, Raphael kosa dia nanala ny Stanza della Segnatura (ny fitsarana ambony papa) ny fomban-drazana Mediteraneana lehibe, nanomboka tamin'i Homer ka hatramin'ny androny.
Ny fanokafana ny tsingerin'ny fresco dia ny Sakramenta Masina, izay miaraka amintsika ao amin'ny Parnassus, ary mampahafantatra ny Sekolin'i Atena, izay misy ny lalàna sy ny mistery an'izao rehetra izao resahina, ary ny tsingerina dia mifarana amin'ny endrik'ilay mpanao lalàna Papa.
Ny krizy lehibe, na ara-politika na ny an'ny tenany, izay atrehin'i Julius II, dia manome ny efitrano Heliodorosy taty aoriana toetra amam-panahy, akaiky sy manaitaitra. Nandritra ny taonjato maro, ny pontiff dia naterina ho any amin'ny tempolin'i Jerosalema. Avy eo dia tanterahina ao amin'ny medieval Bolsena (distrika iray manodidina an'i Roma) satria tsy maintsy resy lahatra amin'ny misterin'ny finoana izy io. Mampahafantatra ny tenany amin'i Leo ilay Lehibe izay mandà an'i Attila izy ary, volana vitsivitsy talohan'ny nahafatesany dia nanafaka azy tamin'ny fonja teto an-tany ilay anjely.
Voafidy tamin'ny volana martsa 1513, ny Papa vaovao, ny Leo X, dia nandidy an'i Raphael mba hanao fresco ny Fire Fire. Fa izy kosa dia soloina ho mpampihavana sy Aeneas vaovao, amin'ny maha mpanorina an'i Roma azy, mandresy amin'ny ady atao amin'ireo tsy mahatoky izy, mametraka ny satroboninahitry ny fanjakana amin'ny lohan'i Carlo Magno (mpanjaka Franco-Lombard, amperoran'ny Empira Romanina Masina) ary miady ny fiampangana rehetra natao taminy.
Tamin'ny 1519, Raphael dia nanomana ny tsingerin'ny Constantin ho an'ny Papa, fa nandalo, namela ny asa tsy vita. Ity volan'ny Profesora CLFrommel ity dia miaraka amintsika amin'ny dia namakivaky ireo efitrano izay naverina tamin'ny laoniny. Sanganasa aorian'ny sangan'asa, dia manambara ny tanjon'ny asa, izay taratry ny kolontsain'ny Renaissance sy ny papa.
Christoph Litpold Frommel (Heidelberg, 1933) dia mpampianatra tao amin'ny University of California, Berkeley. Nanomboka tamin'ny 1980 ka hatramin'ny 2001 dia talen'ny Hertziana Library of Rome (Max Planck-Institut) izy. Teo anelanelan'ny 2002 sy 2005 dia profesora fanta-daza tao amin'ny Oniversiten'i Roma izy ary nahazo mari-pahaizana mari-pahaizana avy amin'ny University of Naples Federico II. Izy no tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Repoblika Italiana, ny Loka Borghese, ny Akademian'ny Lincei, ny Akademia anglisy ary ny Akademia San Luca; mpikambana tao amin'ny Filan-kevitra ambony momba ny lova ara-kolontsaina ho an'ny andrim-panjakana sy tranomboky ary tamin'ny 2011 dia nahazo ny mari-pankasitrahana Cultori di Roma izy.